၁၄:၅၈၊ ၂၁ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၀ ရက်နေ့က မူ
Minor Encoding fixes by Lionslayer::.
၁၃:၃၁၊ ၁၈ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၀ ရက်နေ့က မူ (ပြင်ဆင်ရန်)
၁၄:၅၈၊ ၂၁ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၀ ရက်နေ့က မူ (ပြင်ဆင်ရန်) (နောက်ပြန် ပြန်ပြင်ရန်)
အရေးမကြီး (Minor Encoding fixes by Lionslayer::.)
ရသေ့ ဦးခနီ္တအား တောင်ခွင် သာသနာပိုင် ဆရာတော်ကြီးက 'သာသနာ့ ဟိတ ဓဇ နာယက' ဟူသော ဘွဲ့တံဆိပ်ဖြင့် ချီးမြှင့်ခဲ့သည်။ ယင်းသို့ ချီးမြှင့်သည်နှင့် လျော်စွာ ဦးခနီ္တသည် ရွှေမြင်တင်တောင် အဝန်း၌ စေတီ ၄၉ ဆူ၊ ကျောင်းပေါင်း ၃၄ ကျောင်း၊ တန်ဆောင်ပေါင်း ၁၆၊ ရုပ်ပွားတော်ကြီး ၁၅ ဆူ တို့နှင့် အခြား အဆောက်အအုံ များကို ၈ နှစ် ကာလ အတွင်း တည်ဆောက် ခဲ့သည်။ တောင်ပခြုပ် ၌လည်း ချမ်းသာရ စေတီ၊ ဆုတောင်းပြည့် စေတီ၊ ကျိုက်ထီးရိုး စေတီ၊ ကျောက်ဆင် စေတီ တို့ကို တည်ထား ပြုစု ခဲ့သည်။ ၁၂၆၂ ခုနှစ်၌ ပျဥ်းမနားပျဉ်းမနား ဆင်ပြုတောင်သို့ ့ကရောက်၍ လည်းကောင်း၊ ထိုမှ လယ်ဝေးသို့ ့ကရောက်၍ လည်းကောင်း၊ ဘုရား ပုထိုး အဆောက်အအုံ စသည် များစွာ တို့ကို တည်ဆောက် ခဲ့သည်။
ထိုစဥ်ထိုစဉ် အခါက ဦးခနီ္တ၏ စေတနာနှင့် လုပ်ငန်းကို မြန်မာနိုင်ငံ တဝန်းလုံး သိရှိ နှစ်သက် ကြသဖြင့် အနယ်နယ် အရပ်ရပ်မှ စေတနာရှင် များသည် အလှူငွေ များကို ရက်ရောစွာ ထည့်ဝင် လှူဒါန်း ကြသည်။ ဦးခနီ္တ ဆိုလှျင် စိတ်ချစွာဖြင့် သဒ္ဒါ ယုံကြည် ကြသည်။ ဗြိတိသှျ အစိုးရ ကလည်း ဦးခနီ္တအား သွားလိုရာ ရေကြောင်း၊ ကုန်းကြောင်း ခရီလမ်း များကို လွယ်တကူ သွားလာနိုင်ရန် ခွင့်ပြု လက်မှတ်များ ဆက်ကပ် လှူဒါန်း ထားသည်။ ဦးခန္တီ ပြုစု တည်ထားသော ဘုရား ပွဲတော် ပျော်ပွဲ၊ ရွှင်ပွဲများ ကျင်းပလိုက အစိုရ ထံ၌ အမိန့် ခံယူရန် မလိုခြင်း စသော အထူး အခွင့်အရေးများ ကိုလည်း ပေးထားခြင်း ခံခဲ့ရသည်။
ဒုတိယ ကမာ္ဘစစ်ကြီး အပြီး၌ ရသေ့ကြီး ဦးခနီ္တသည် စစ်ဒဏ်ကြောင့် မိမိ ကောင်းမှုများ ပျက်စီး သည်ကို အသစ် ပြန်လည် ပြင်ဆင် မွမ်းမံ ခဲ့သည်။ ဤသို့ ပြင်ဆင် မွမ်းမံရင်းပင် အဆောက်အအုံ အသစ်များ ကိုလည်း ထပ်မံ တည်ဆောက်ရန် စီမံ စိုင်းပြင်း ခဲ့သည်။ ယင်းသို့ စီမံ ဆဲ၌ပင် ၁၃၀၇ ခုနှစ် လောက်က စွဲကပ်သော လေငန်း ရောဂါ ဝေဒနာကြောင့် ကိုယ်တခြမ်း အနည်းငယ် သေနေရာမှ ၁၃၁ဝ ပြည့်နှစ် ပြာသို လပြည့်ကျော် ၁၄ ရက် ည အသက် ၈၁ နှစ် အရွယ်တွင် ဥတုဇရုပ် ကလာပ် ချုပ်ငြိမ်းခြင်းသို့ ရောက်သည်။ ရသေ့ကြီး၏ ရုပ်ကလာပ်ကို ၂ နှစ်တိုင်တိုင် ပူဇော် ကန်တော့ ကြ၍ နိုင်ငံတော် အစိုးရက ထောက်ပံ့ အလှူတော်ငွေ ၅၀၀ဝ ကျပ် အရပ်ရပ် စျာပနဈာပန အလှူတော် ရန်ပုံငွေများ စုပေါင်းလျက် ၁၃၁၂ ခုနှစ်၊ တပို့တွဲ လဆန်း ၈ ရက်နေ့မှ တပို့တွဲ လပြည့်နေ့ အထိ ခမ်းနား သိုက်မြိုက်စွာ သင်္ဂြိုဟ်ခြင်း ပြုခဲ့ကြ၏။ <ref>၂၀၀၂ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလတွင် စပယ်ဦး စာပေ ဖြန့်ချီရေးက တတိယ အကြိမ် အဖြစ် ထုတ်ဝေ ဖြန့်ချိခဲ့တဲ့ ရွှေဥသြ ပြုစုတဲ့ 'တချိန်က ထင်ရှားခဲ့သော ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများ'</ref>--[[User:Mayor mt|Mayor mt]] 06:08, 22 မတ် 2010 (UTC)
"https://my.wikipedia.org/wiki/အထူး:MobileDiff/53638" မှ ရယူရန်